Kardemir gariiradda qaro Turkey ayaa waxaa soo saaray in Worldwide ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia78 KarabukTurkey ayaa Kardemir qaro weyn waxaa soo saaray in dhexroorka gariiradda
13 / 12 / 2019 78 Karabuk, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Warqad Hordhac ah, TURKEY
soo-saarka uu Kangal in turkiyenin kardemir cape qarada
Turkey ayaa Kardemir waxaa soo saaray in dhexroorka gariiradda qarada waaweyn; Ul gariiradda Facility aasaasay baabuurta, difaaca iyo mashiinada for Industry Warshadaha ee KARDEMİR sii wado steel tayada wax soo saarka, sida ay wax soo saarka lowska Turkey ee wax soo saarka gariiradda dhexroor qarada weyn waxaa lagu fuliyay guul.
Agaasimaha guud ee KARDEMİR ayaa bayaan ka soo saaray mowduuca. Hüseyin Soykan wuxuu yiri, Çubuk Shaqadeena Rod iyo Kangal Rolling Mill, oo leh qaab wax soo saar dabacsan, waxaan sii wadaynaa daraasadeena kobcinta badeecada qeybo badan iyo dhexroor dhinacyo badan, gaar ahaan qeybta gawaarida, difaaca iyo warshadeynta mashiinada. Annaga oo kaashanayna Nidaamkeena Maareynta Gawaarida IATF 16949, waxaan horumarinaa tayada birta ee ku habboon soo-saareyaasha xawaaraha, kaas oo aan rajeynayno inay wax weyn ku soo kordhiso wax soo saarkeena gawaarida maxalliga ah, oo ay weheliso hormuudka sare ee soosaarayaasha iyo soosaarayaasha shinnida ee waddankeenna. Macnaha halkan, wax soo saarka lowska iyo tayada 38 42 gariiradda of dhexroor ku haboon iyo xnumxmm aan gaarney in arrintan wax soo saarka ugu horeysay Turkiga. Waxaan u hambalyeynayaa dhamaan shaqaalahayga. Caafimaadka caafimaadkooda iyo dhididkooda. Kala-duwanaanshaha dhuxul-duubyada dhexroor dheellitirkoodu culus yahay, oo ay waaxdu si buuxda ula kulanto alaabada la soo dejiyo, waxay si wanaagsan uga qeyb qaadan doontaa ganacsiga shisheeye ee waddankeenna. ”
Tareen taga magaalada Sivas
5 ayaa ku soo galay wadada tareenka
Cusbitaalada Syria ee ku yaalla Samsun waxaa ku dhuftey taraamka
Dhirta Coil ukubuk
Warshadaha Wax Soo Saarka Warshadaha
Nidaamka Maareynta gawaarida
Wax soosaarka Gawaarida Guriga